SIYINKOSI - IINDABA
Ukufakela iphupha lephupha kunye ne-R & B, UKUMKANI uhamba nge-albhamu yakhe yokuqala, esenza ukuba kube lula ukudibanisa umoya kunye noSade noJanet Jackson. UKUMKANI uphawula umva ngexesha apho bekukho umahluko ocacileyo phakathi kweR & B, pop, kunye nehip-hop, xa izenzo ezinje ngeJodeci kunye ne-SWV zilawula amaza omoya kwaye umculo wawukhaphukhaphu kwaye ubanomtsalane.
phezulu emlilweni uphononongo olukhanyayo
Dlala iTrek 'Hei' (Umxube owandisiweyo) -UKUMKANIUkuhamba SoundCloud
Ngo-2011, UKUMKANI bt EP aphume ndawo ukuza kumdumisa kwangoko: INkosana, iRoots bandleader? uestlove, kunye nomphathi woTshintshiselwano lwaNgaphandle uPhononte Coleman bonke bancoma italente yeqela, kunye nommemezeli uKendrick Lamar wabonisa isampulu esithi 'Heyi,' yeyona ngoma imnandi kaKumkani, Icandelo. 80 umkhondo 'Isahluko sesithandathu.' Iqela lisebenze nemvumi uBilal ngengoma ekwi-albhamu yakhe ka-2013, Uthando lwe-Surreal , Kunye nomdlali wepiyano wejazz uRobert Glasper Irediyo emnyama I-LP. Ngo-2014, kwi-FYF Fest eLos Angeles, iimvumi zigqume u-Nina Simone's 'to Be Young, Gifted and Black' ecaleni kukaDevonté Hynes, uMoses Sumney noSolange. Esi sithathu — siquka uAnita Bias kunye namawele eParis kunye noAmber Strother- siyibonile isitokhwe sayo sinyuka kakhulu, nangona sasingenawo nomculo omninzi esasinokuthetha ngawo. I-EP yabo yayineendlela ezintathu kuphela-ezintathu kuhle iingoma-kodwa uluhlu lokudlala olufutshane nangona kunjalo. Emva kwee-singles ' Ngeli xesha kunye ' UMphathiswa Chameleon , 'UKUMKANI wayezimisele ukukhupha i-LP yakhe ekudala ilindelwe kwi-2014, kodwa unyaka weza kwaye wahamba ngaphandle kweprojekthi epheleleyo. Ke unomdla omkhulu kuyo SINGUKUMKANI , nokuba iimvumi zikwipheringi yeesangqa ezinkulu.
Ukufakela iphupha lephupha kunye ne-R & B, UKUMKANI uhamba nge-albhamu yakhe yokuqala, esenza ukuba kube lula ukudibanisa umoya kunye noSade noJanet Jackson. SINGUKUMKANI Isisityebi kwaye inenguqu, egxile kwindawo engacacanga ye-tempo evusa ubume be-surreal. UKUMKANI uphulaphula umva kwixesha apho kwabakho umahluko ocacileyo phakathi kweR & B, pop, kunye nehip-hop, xa wenza njengoJodeci kunye SWV lawula amaza omoya, kwaye umculo wawukhaphukhaphu kwaye unomdla ngakumbi. SINGUKUMKANI ikhumbula okona kulungileyo kwelo xesha ngaphandle kokuyihlaziya ngokupheleleyo. Ezi zandi zezala maxesha ngokumangalisayo, kodwa xa zidlala, uzibona ucinga ngamaxesha alula — loo mngqungqo ugodukayo okanye ukwanga okokuqala — njengokuba iimvumi zigcina ilizwi lazo lisemva. Le ayisiyi-LP yeembaleki ezide okanye ngaphezulu kwelizwi eliphezulu lesosi. Kukuchukumisa okulula, okwakhelwe ukuseka imeko yokucamngca. 'KwiNgoma Yothando,' umzekelo, abaculi bayangcangcazela ngaphandle kokuma kwamagama. Ukuqanjwa kubaluleke ngokulinganayo, kwaye kulo lonke icwecwe, UKUMKANI wenza umsebenzi obalaseleyo wokuvumela umculo uphefumle ixesha lawo lokubaleka elinemizuzu engama-60.
Ngaphezulu kweendlela zayo ezili-12, SINGUKUMKANI ityhila kancinci kancinci nge-liners ezimnandi ezihamba zivela kwiindawo ezikude, ezinje nge 'Supernatural,' enye yezinto ezintathu zokubamba kwiqela le-EP. Emva kokungeniswa okufutshane kwe-wails ebukhali, le ngoma iba yi-ode eyenziweyo yothando lwenjana: 'Kukho umlingo yonke into wenza… ndithandana no yonke into 'Ndiyanithanda.' SINGUKUMKANI usihende ukuba sisuke kwizinto eziqhelekileyo, sichithe ixesha kwiindawo ezinkulu ngaphandle kwee-smartphones kunye nemidiya yoluntu. Phakathi kwezinye izinto, iParis, iAmber, kunye noAnita bafuna ukuba uphinde unxibelelane nabantu bokwenyani kumanqanaba okwenyani, ukuba ufunde ubuncinci babo kwaye wamkele ubunzima babo. Bangathanda ukuba uyayixabisa into ephambi kwakho, hayi umhlaba owenziweyo ongaphaya kwephasikhowudi yakho. 'Iliso elibomvu,' ukusikwa kotshintsho kufutshane necwecwe le-albhamu, kungokutyhala ngaphaya kwendawo yakho yokuthuthuzela. 'Umhlaba woMthonyama,' ingoma yokuvala yealbham, inombono wohambo olukhulu lokuya kunxweme olukude.
I-albhamu katy Perry yolutsha ephupha
Ngamaxesha athile, iimvumi zijongana nemicimbi esehlabathini, imiba esekwe ngakumbi, izinto esinokuthi sinxibelelane nazo sonke. 'Mnumzana Chameleon' yintsomi yomsi kunye nezipili, zokuthandana nomntu obucinga ukuba uyamazi. 'Ndiyakucela!' ibonisa ukuleqwa kwezothando: Yeyona albhamu ibonakalisa ubuntu, kwaye amazwi avakala ngakumbi. Iphelele, SINGUKUMKANI ayinamthungo: Ibonisa ngokufanelekileyo ubuchwephesha bomoya obonwabisayo beqela kwaye inobuchule bokuziva kamnandi kwizikhanyiso ezinkulu zomculo omnyama. Ngokuqinisekileyo kuthathe ixesha ukufika apha, kodwa ubugcisa obungakhawuleziswanga bunemivuzo ekhethekileyo. SINGUKUMKANI inempembelelo ehlala ihleli, kufana nomculo ewukhuphayo.
kunye nesoka elisentshona mamas
betty davis bathi ndohlukile
umfundisi t. l. barrett
I-albhamu ekhawulezayo kaTaylor 1989
mtv rock ivoti